New partnership to reach halfamillion people in Rakhine with humanitarian and development aid | United Nations in Myanmar
New partnership to reach halfamillion people in Rakhine with humanitarian and development aid
This partnership demonstrates the commitment of the international community to help find and implement solutions to the situation in Rakhine State.
Nay Pyi Taw - Representatives of the Governments of Japan and Myanmar and seven United Nations agencies signed today agreements totaling US$ 20 million to implementanumber of humanitarian and development projects benefitting people of all communities in Rakhine State.
“This partnership demonstrates the commitment of the international community to help find and implement solutions to the situation in Rakhine State,” said Knut Ostby, the UN Resident and Humanitarian Coordinator ad interim in Myanmar.
The seven agencies, IOM, UNDP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN Women and WFP will providearange of food and development assistance throughout Rakhine State. The participating agencies will integrate their activities – in line with the humanitarian-development-peace nexus – to achieve better results.
“Our immediate concern is provision of humanitarian aid to people in need – irrespective of their religion, ethnicity, gender or citizenship status,” added Knut Ostby. “At the same time, more than 40 percent of people in Rakhine live in poverty and we have to reach them with development assistance in order to set the State on the path to peace and inclusive growth.”
The Myanmar’s Minister of Social Welfare, Rehabilitation and Resettlement H.E. Mr. Win Myat Aye, Ambassador of Japan H.E. Mr. Tateshi Higuchi and representatives of the United Nations participated in the signing ceremony in Nay Pyi Taw.
“In synergy with UNICEF, WFP, UNHCR, UNDP, UN-Women and UNFPA jointly with IOM which all have different expertise, the projects aim to improve humanitarian and development situation in Rakhine State with the approach of the humanitarian-development nexus, which is strongly advocated by the Government of Japan,” said Ambassador Higuchi.
The UN projects aim to reach halfamillion beneficiaries over the next 12 months. The projects will cover:
· distribution of food, support for screening and treatment of severe acute malnutrition and feeding practices with emphasis on children;
· health services to vulnerable groups, such as pregnant women;
· assistance with rehabilitation of shelters;
· expanding access to drinking water and sanitation services;
· providing safe spaces for children;
· improving access to mental health and psychosocial support, particularly for survivors of gender-based violence;
· support for education activities;
· promoting inclusive and responsive service delivery;
· improving access to justice and rule of law;
· identifying livelihoods and peacebuilding opportunities; and
· creating employment opportunities, particularly for women.
“All our activities will support the implementation of national development goals and the Rakhine Advisory Commission’s recommendations,” said Knut Ostby.
“As we will be carrying out our activities, we will be making sure that we observe international standards and principles.”
While the Government of Myanmar has opened up some access for the UN and its partners to some of the crisis affected areas in Rakhine State, humanitarian access remains restricted. The UN will continue to advocate forameaningful and predictable access allowing distribution of humanitarian and development assistance for the benefit of all communities.
Additionally, the UN in Myanmar will continue to call for voluntary, safe, sustainable and dignified return of refugees to places of origin -- and UNHCR’s involvement in the repatriation process.
“With the recent crisis in mind, we need to be able to face peace, development and human rights challenges simultaneously. These projects will be important contribution both to addressing the immediate needs andapath to sustainable development for all communities in Rakhine State,” concluded Knut Ostby.
UNHCR: Paul Vrieze at +95(0)9 44803 4427 or vrieze@unhcr.org
UNFPA: Yenny Gamming at +95-1-542910-19 Ext. 149 or gamming@unfpa.org
UNICEF: Alison Rhodes at +95 1 2305960-69 Ext. 1446 or arhodes@unicef.org
WFP: Arsen Sahakyan at +95 12305971 Ext. 2420 or arsen.sahakyan@wfp.org
Office of the UN Resident and Humanitarian Coordinator: Stanislav Saling at +95-942 651 9871 or stanislav.saling@one.un.org
Background on UN agencies
Established in 1951, IOM is the leading inter-governmental organization in the field of migration and works closely with governmental, intergovernmental and non-governmental partners. With 169-member states,afurther 8 states holding observer status and offices in over 100 countries, IOM is dedicated to promoting humane and orderly migration for the benefit of all. IOM works to help ensure the orderly and humane management of migration, to promote international cooperation on migration issues, to assist in the search for practical solutions to migration problems and to provide humanitarian assistance to migrants in need, including refugees and internally displaced people. IOM established its operations in Myanmar in 2005, and Myanmar became IOM’s member state in 2012.
UNHCR, the UN Refugee Agency, is mandated to provide humanitarian aid and protection to refugees, forcibly displaced communities and stateless people worldwide, and assist in their safe and voluntary repatriation, local integration or resettlement.
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လူဦးရေ ၅ သိန်းထံသို့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများ ပေးအပ်ရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအသစ် - ကုလသမဂ္ဂ
ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရများနှင့် ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီ ၇ ခုတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လူ့အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး ကို အကျိုးပြုမည့် လူသားချင်းစာနာမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ တန်ဖိုးရှိ သဘောတူညီချက်များကို နေပြည်တော်တွင် ယနေ့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။
“ယခုလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို ကူညီအဖြေရှာပြီး အ ကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးလိုတဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကို ပြသလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူး (ယာယီ) Knut Ostby က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဖော်ပြပါသဘောတူညီချက်အရ IOM, UNDP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN Women နှင့် WFP တို့က ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်ဝှမ်းတွင် စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများကို ပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ပါဝင်သော အေဂျင်စီများအနေဖြင့် လူသားချင်းစာနာမှု - ဖွံ့ဖြိုးရေး - ငြိမ်းချမ်းရေး အားလုံးကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန် သော ရလဒ်များ ရရှိရေးအတွက် မိမိတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ငင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ လူများကို လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကျား-မ သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားဖြစ်တည်မှု မခွဲခြားဘဲလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများ ပေးနိုင်ဖို့းဖြစ်ပါတယ်” ဟု Knut Ostby ပြောကြားခဲ့သည်။ “တစ်ချိန်တည်းမှာဘဲ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ လူပေါင်း ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ဟာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ငြိမ်းချမ်းမှု နဲ့ အားလုံးပါဝင်မှုရှိတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းကြောင်းအပေါ်ကို ရောက်ရှိစေဖို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေ ရောက်ရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး H.E ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးသည် ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E Mr. Tateshi Higuchi နှင့် ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေ ညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့်လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူး (ယာယီ) Knut Ostby တို့နှင့်အတူ စီမံကိန်းသဘောတူညီချက်များကို နေပြည်တော်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။
သံအမတ်ကြီး Mr. Higuchi ကပြောကြားရာတွင် “မတူညီတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ UNICEF၊ WFP ၊ UNHCR ၊ UNDP ၊ UN-Women ၊ UNFPA နဲ့ IOM တို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မဲ့ ယခုစီမံကိန်းဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေကို ပိုမိုတိုးတက်စေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုလုပ်ဆောင်ရာမှာ ဂျပန်အစိုးရက အားတတ်သရောထောက်ခံပြောကြားလေ့ရှိတဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှစ်ခုကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံနဲ့ လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုကုလသမဂ္ဂစီမံကိန်းများသည် လာမည့် ၁၂ လကျော်အတွင်းမှာ အကျိုးခံစားခွင့်ရမည့်လူပေါင်း ၅ သိန်းဆီ သို့ ရောက်ရှိအောင် ရည်မှန်းထားပါသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်မည်ဖြစ်သည် -
· စားနပ်ရိက္ခာဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း၊ အလွန်အမင်း အဟာရချို့တဲ့မှုများကို စစ်ဆေးပြီး ကုသမှုပေးရန်အတွက် ပံ့ပိုးပေးခြင်း နှင့် ကလေးသူ ငယ်များကို အဓိကထား၍ အစာအဟာရကျွေးမွေးခြင်းလုပ်ငန်းများ၊
· ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များကဲ့သို့သော ထိခိုက်ခံစားလွယ်သည့်အုပ်စုများကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများ၊
· နေအိမ်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင် အကူအညီများပေးခြင်း၊
· သောက်သုံးရေနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးချဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊
· ကလေးများအတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံသောနေရာများ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊
· အထူးသဖြင့် ကျား-မအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုကို ခံစားလွတ်မြောက်လာသူများအတွက် စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
· ပညာရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပံ့ပိုးမှုပေးခြင်း၊
· အားလုံးပါဝင်ပြီး လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုကိုပေးနိုင်သည့် ၀န်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးရန်။
· မျှတသောတရားစီရင်မှုရရှိရေးနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး
· အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပြုချက်များ အကောင်အထည်ဖော်မှုကို အထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု Knut Ostby က ပြောကြားသည်။ “ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်နေစဉ်မှာ ကျွန် တော်တို့အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနဲ့ အခြေခံမူများကို လိုက်နာမှုရှိရေးအတွက်လည်း အာမခံချက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ဆက်လက်ပြောကြားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂနှင့်၎င်းး၏မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကို ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ပဋိပက္ခဒဏ်ခံရ သောဒေသအချို့သို့ ကူညီဆောင်ရွက်ခွင့်အချို့ပေးခဲ့သော်လည်း လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူ အညီများပေးအပ်ရေးမှာတော့ အကန့်အသတ်များ ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကုလသမ
ဂ္ဂအနေဖြင့် လူ့အဖွဲ့ အစည်းအားလုံး အကျိုးရှိစေရေးအတွက် လူသားချင်းစာနာမှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်ထိရောက်မှုရှိပြီး၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့် အကူအညီပေးခွင့်ရရှိရေးအတွက် ဆက်လက်ထောက်ခံအကြံပြု မှုကို သွားမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် ဒုက္ခသည်များ ၄င်းးတို့၏ မူလနေရာများသို့ ဆန္ဒအလျောက်၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစွာ၊ ရေရှည်တည်တံ့ပြီ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ပြန်လာနိုင်ရေးအတွက် လည်းကောင်း၊ ပြန်လည် လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် UNHCR မှ ပါဝင် ကူညီသွားနိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း ဆက်လက် အကြံပြုသွားမည် ဖြစ်သည်။
“မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခအခြေအနေအရ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို တပြိုင်နက်တည်း ရင်ဆိုင်နိုင်ရန်လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ယခုစီမံကိန်းတွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးအတွက် လတ်တလောလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အတွက်သာမက၊ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိရေးအတွက်လည်း အရေးပါတဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု Knut Ostby က ဆက်လက်ပြောကြားပါသည်။
IOM ကို ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီး အစိုးရအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ပြီး ရွှေ့ပြောင်းသွားလာရေးကိစ္စများကို လုပ်ကိုင်နေသော ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် အစိုးရမိတ်ဖက်များ၊ အစိုးရအချင်းချင်းအကြားနှင့် နိုင်ငံတကာ မိတ်ဖက်များဖြင့် နီးကပ်စွာလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ IOM တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၉ နိုင်ငံရှိပြီး နောက်ထပ် ၈ နိုင်ငံမှာ လေ့လာသူအဖြစ်ပါဝင်လျက်ရှိပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တွင် ရုံးခန်းများဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ IOM သည် အားလုံးအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် လူသားဆန်ပြီး စနစ်တကျရှိသော ရွှေ့ပြောင်းမှုများဖြစ်စေရန် အစဉ်တစိုက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာရာတွင် လူသားဆန်ပြီးစနစ်ကျသော ရွှေ့ပြောင်းမှုများ ဖြစ်စေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို မြှင့်တင်ရန်လည်းကောင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာ ပြသနာများအတွက် လက်တွေ့ကျသော အဖြေများကို ရှာဖွေရာတွင် ပံ့ပိုးကူညီရန်အတွက်လည်းကောင်း ဒုက္ခသည်များနှင့် နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေသူများအပါအ၀င် အကူအညီလိုအပ်နေသည့် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူများအား လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုများပေးရန်အတွက်လည်းကောင်း IOM မှ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
နိုင်ငံနှင့်နယ်မြေဒေသပေါင်း ၁၇၀ ခန့်တို့တွင် UNDP သည် ကမ္ဘာမြေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရင်း ဆင်း ရဲနွမ်းပါးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ UNDP အနေဖြင့် နိုင်ငံများအား ၄င်းတို့၏ တိုးတက်မှု များ ရေရှည်တည်တံ့မှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက် အားကောင်းသော မူဝါဒများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အင်စတီကျူးရှင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် ကူညီပေးနေပါသည်။
UNFPA သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုတိုင်းအား လက်ခံနိုင်သော၊ ကလေးမွေးဖွားမှုတိုင်းအား ဘေးကင်းမှုရှိသော၊ လူငယ်တိုင်း၏ အလားအလာများကို ဖြည့်ဆည်းပေးသော ကမ္ဘာကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီဖြစ်သည့် UNHCR သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဒုက္ခသည်များ၊ အတင်းအကြပ်ဖိအားများကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာ နေထိုင်ကြရသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေသူများကို လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီ နှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများပေးရန် နှင့် ယင်းတို့၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိရေး နှင့် ဆန္ဒအလျောက် နေရပ်ပြန် ရေး၊ ဒေသအတွင်း ပေါင်းစည်းရေး သို့မဟုတ် ပြန်လည်နေရာချထားရေးတို့ကို အကူအညီပေးရန် တာဝန်ပေး အပ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်မှစတင်၍ UNICEF အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့်ပြည်သူများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် နေပါသည်။ အစိုးရနှင့်အရပ်ဘက်လူ့မှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းလျှက် UNICEF ၏ လက်ရှိ အလေးထားဆောင်ရွက်နေသည့်လုပ်ငန်းများမှာ ကလေးသူငယ်သေဆုံးမှုလျှော့ချရေး၊ အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး လက်လှမ်းမီသော ပညာရေး မြှင့်တင်ပေးခြင်း နှင့် ကလေးသူငယ်များ အကြမ်းဖက်ခံရမှု၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု နှင့် ခေါင်းပုံဖြတ်မှုတို့မှ ကာကွယ်မှုပေးခြင်း တို့ကို ရည်မှန်းချက်ထားဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
UN WOMEN သည် ကျားမတန်းတူရေးနှင့် အမျိုးသမီးများကို စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကလေးများအတွက် အဓိကလုပ်ဆောင်သည့် ဦးဆောင်အဖွဲ့ဖြစ်ရာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရာတွင် အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် UN Women ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် ကျားမ တန်းတူညီမျှမှု ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစံနှုန်းများချမှတ်ရာတွင် UN Women မှ ပံ့ပိုးပေးသကဲ့သို့၊ အစိုးရများနှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းကာ ဥပဒေများ၊ မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များနှင့် လိုအပ်သော ၀န်ဆောင်မှုများ ရေးဆွဲရာတွင် စံနှုန်းများနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများ ကောင်းစွာအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။
WFP သည် ကမ္ဘာအနှံ့ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုတိုက်ဖျက်ခြင်း၊ အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် စားနပ်ရိက္ခာဖြန့်ဝေ ပေးခြင်း နှင့် အဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ကြံကြံခံနိုင်စွမ်းတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက် ရပ်ရွာပြည်သူများနှင့်လက်တွဲ လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နေသည့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အထောက်ပြု အေဂျင်စီ ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်စဉ် WFP သည် နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ခန့်ရှိ ပြည်သူပေါင်း သန်း ၈၀ ခန့်ကို ပံ့ပိုးကူညီမှုများပေးနေပါ သည်။
Press release - PDF- English Version
Press release - PDF- Myanmar Version
Spokesperson, Office of the UN Resident and Humanitarian Coordinator